Ihe na-adọrọ mmasị nke anụ ufe - ihe mere anyị ji amasị ọtụtụ ndị dinosaur
Nlekọta na ụgwọ nke anụ ufe dị ka anụ ụlọ
O yiri ka ọ bụ ihe kachasị njọ na nkịta ma ọ bụ pusi kpochapụla. Ugbu a, na ụlọ ndị German, anụ ugbo na ụmụ anyị na-achọ ugbu a, na-achọ turtle, gecko ma ọ bụ tarantula.
Ihe anyị na-eme iji kpalie isi anyị bụ n'ezie nhọrọ na onye ọzọ na anụ ụlọ mara mma. Ee, mgbe niile, ị nwere petrị pụrụ iche n'ụlọ gị. Ma, ọ bụ onye na-eme nri dị mma maka ezinụlọ nwere ụmụ ma ọ bụ ma ọlị?
Ndi anumanu ndi ozo kwesiri ka anu ulo nye umuaka?
Ọ dị ịtụnanya, mana ntụrụndụ ma ọ bụ ụdị dịgasị iche iche dị iche iche na-adọrọ mmasị anyị, eleghị anya n'ihi na ha na-echetara anyị oge echefuru echefu.
Na mgbakwunye, ha dị iche na ọdịdị ha, na-akpa àgwà megidere anụ ọhịa ndị mara mma ma dịkwa oke mma n'ọdịdị.
Ee, ihe ndị na-akpụ akpụ bụ anụmanụ dị ịtụnanya. Ma adabara dị ka anụ ụlọ? Maka umuaka?
Ànyị kwesịrị ịzụta ihe na-akpụ akpụ?
Tupu i chee echiche banyere ịzụta ihe na-emepụta anụ, dị ka chameleon ma ọ bụ osisi, ị kwesịrị ịma ihe ụfọdụ.
Nke mbụ, onye na-eme nri na-adịghị arụ ọrụ ma na-agwụ anyị ọnụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnụ ụtọ ọdịdị anụ ahụ na-adịgide adịgide, ị gaghị enwe obi ụtọ na ha n'ọdịnihu. Nti ihe na-agagharị mgbe enwere ihe iri. Na ọnwa nke ibu ọnụ dị mma dị ka ọ dịghị ma ọlị.
Ụfọdụ ụdị ihe ize ndụ adịghị emetụ otu mita n'ụbọchị ma ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na anyị anaghị ahụ ya. Ụmụaka, karịsịa, ga-abụrịrị ngwa ngwa ngwa ngwa iji gụkọta ha.
Na-emepụta ihe, ị pụghị ịghada, na-eje ije ma ọ bụ buru ya gburugburu. Ọzọkwa, ọ dịghị mgbe ụmụ mmadụ ga-adọrọ anụ ọhịa. Ị gaghị achọ oge na ume ịkụziri ihe a, ọ gaghị amụta.
Oyiyi na agba agba - Igwe na-agbanwe akpụkpọ ụkwụ
Ọzọkwa, onye na-eme nri adịghị achọ mkpa ịbịaru nso ma ọ bụ na-achọ ka gị na ya kpudo. Ọ dịghị achọ gị ntị. N'ụzọ dị iche, wepụ ya na terrarium, a ga-emesi ya ike, ọ gaghị enwekwa ike ịmụta na ị naghị eme ihe ọ bụla na ya.
Ihe na-emepụta ihe dị oke ọnụ, ọ bụghị naanị na ntanye ihe. A ghaghị ịgbakọ ego ọkụ eletrik ọ bụla maka ọkụ ọkụ ọ bụla. Na mgbakwunye, ezigbo terrariums na-efu ọtụtụ narị euro, ngwa ngwa na nri nwere ike ịkụ kwa ọnwa kwa ọnwa na 50 Euro na akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị naghị anụ ọkụ n'obi banyere ihe ndị na-akpụ akpụ ma na mgbe ụfọdụ ịchọta ha na-adọrọ mmasị, ị gaghị azụcha anụ. Tụkwasị na nke ahụ, ụdị anụ ugha dị iche iche anaghị adị n'aka ụmụaka. Ọ bụ ezie na nwa atụrụ agaghị eme mkpesa mgbe obere Hugo na-eburu ya n'ime ụlọ ahụ banye n'ubi ahụ, ọ gaghị ahụ ya n'anya.